ग’म्भीर स’ङ्क्रमितको संख्या बढ्यो, आइसीयु शैया खाली छैन ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ग’म्भीर स’ङ्क्रमितको संख्या बढ्यो, आइसीयु शैया खाली छैन !
ग’म्भीर स’ङ्क्रमितको संख्या बढ्यो, आइसीयु शैया खाली छैन !
ग’म्भिर प्रकृतिका को’रोना सं’क्रमित वि’रामीको संख्या वृद्धि भएपछि भरतपुरका अस्पतालहरुमा आइसियुको अ’भाव हुन थालेकको छ । कोभिड १९ को’रोनाका वि’रामी राखेर उपचार गराउदै आएका तीन वटा ठूला अस्पतालमा आइसीयु शैया खाली नभएको आस्पतालले जनाएको छ । भरतपुर सरकारी अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज र पुरानो मेडिकल कलेजले अहिले को’रोनाका वि’रामीलाई आइसीयुको अलगै शैया राखेर उपचार गराउँदै आएको छ ।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलले भन्नु भयो ‘अस्पतालले छुट्टाएको १० वटा आइसीयु शैया खाली छैन । अस्पतालमा भर्ना भएर बसेका को’रोना सं’क्रमितलाई ज’टिल भएमा आइसियु चाहिले क’ठिन हुने भएको छ ।’ अस्पतालमा रहेकको आइसीयु मध्य १० वटा को’रोनालाई छुट्टाएका छौ अहिलेसम्म शैया खाली हुन पाएको छैन ।
अन्य समयमा भन्दा अहिले सं’क्रमित भएर आएकाहरुमा ज’टिल स’मस्या देखिने क्रम वढ्दो छ । त्यो अवस्थामा आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्ने हुन्छ । उहाँका अनुसार अस्पतालमा अहिले ६३ जना को’रोना सं’क्रमितको उपचार भइराखेको छ । ती मध्य १० जना आइसीयुमा रहेका छन् ।
को’रोना सं’क्रमितको उपचार गराउदै आएको चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर दयाराम लम्सालले भन्नु भयो ‘सं’क्रमित मध्य सातजनाको अवस्था ग’म्भिर छ ।’ ती विरामीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेका छौ । ती बाहेक अन्य वि’रामीपनि आइसीयुमा उपचाररत छन् । केही महिना यता उपचार गर्न आएकका को’रोना सं’क्रमित मध्य आइसियु, भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्ने सख्या वृद्धि हुन थालेको छ ।
उहाँका अनुसार कोभिड १९ को’रोनाका वि’रामीलाई मात्रै राख्न भनेर २९ वटा शैया छुट्टाइएको छ । ती सबैमा वि’रामी भर्ना भएको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
वि’रामीको चाप वृद्धि भएपछि आइसियुमा राख्नको लागि ठाउँ नभएपछि एचडीयुको व्यवस्था गरेको डाक्टर लम्सालले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालमा अहिले ४४ शैयाको एचडीयुको व्यवस्था गरेको छ । अस्तालको आइसोलेसन खाली हुदै जाने तर आइसीयु र भेन्टिलेटर भरिने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
भदौमा नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने , संक्रमित ५० हजार कट्ने प्रक्षेपण